Indlu yeendwendwe e-Allenfts
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguJosephine
Le yindlu esanda kulungiswa enokukhanya kwendalo okuninzi okunomgangatho ofakwe iithayile ngokupheleleyo ukunika imfuneko yobushushu obupholileyo kwimozulu eshushu. Indlu ilele kwinduli yaseBwebajja kwi-2.5km ukusuka e-Entebbe-Kampala road kunye ne-18km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya sase-Entebbe kunye. Umbindi wesixeko saseKampala.
Le yindlu ekufutshane nayo yonke into kodwa ikude kwingxolo evela kwisixeko esilikomkhulu. Ikufutshane nechibi layo laseVictoria kunye neelwandle zayo ezimangalisayo, i-Entebbe Zoo apho izilwanyana zingasuki kwiikheji kodwa ukukhutshwa kwemvelo. Isikhululo seenqwelomoya sase-Entebbe, kufutshane namangcwaba aseKasubi.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, Ibhedi encinci eyi- 1
Le yindawo ebumelwaneni ekhuselekileyo kwaye umhlaba unesikhululo sawo samapolisa agcina umhlaba ukhuselekile.
Abantu bayancedana kwaye baqhele ukubulisana esitratweni. Abantu baseUganda baziwa ngokuba nobubele.
Umbuki zindwendwe ngu- Josephine
I was børn in central Uganda and moved to Denmark in 1998, I am married. I studied Nursing at universecity college Sjealland and has a degree in science /nursing leadership and administration and I am working as a registred Nurse at Orthopedic ward at slagelse Hospital in Denmark. I like taking a walk with my family to keep myself fit and I enjoy watching films series/ action films, sports football, Tenis.
Kwiklabhu yegalufa nje 300m kude ungadibana iindwendwe kwaye ungakwazi ukonwabela og yemveli ukutya kunye drikkes ngesantya esifanelekileyo.
Ngelixa ubona abo banokudlala igalufa. Apha unokuthatha uhambo kwaye ubone yonke ikhosi yegalufa.